Dhaamssa Qilnixxoo Qeerroo irraa Irraa
Madda: Onkolooleessa 28, 2016 - QEERROO NEWS: Qeerroo_News , #FDG - Mana Hidhaa Qilnixxoo fi Mana Hidhaa Impayeera Itoophiyaa.
Mana hidhaa Qilnixxoo ilmaan Oromoo haqa saba isaanii ni dhaabbatu jedhee diinni hubatu funaamanii bakka itti ukkamamanii keessaa tokko. Mirga fi haqa akka ilma namatti qaban diinni kun isaan irraa sarbee jira. Irbaata gahaa fi nagaa dowwachuudhaan akka fayyaa isaanii dhibamu godha. Mana hidhaa keessatti gergoon, hinjiraanii fi tafkiin wal horee akka hirba isaan dhorkuu fi akka dhukkuba adda addaan dhuman isaan gochaa jira. Kunuu xinnaatee yaroo barbaaduu tokko tokkoon gad fudhee waxxala. Namoon bakka Adda adda fagoo irra dhufan fkn akka Raga'a Mulatu, Hirpha Disasa, Marqos Getaneh, Bulti Jalata kkf gaafi tokko male degersa tokko male rakkacha jiru. Namootni yartuun ilmaan saba isaanii biratti kabajaa guddaa qaban reebichaan salphisu. Yaroo itti ilmi nama du’a hawwatu keessa akka jiran wal nama hin gaafachiisu.
Gubanii fi ajjeessanii akka kan lubbuun jiru illee hin waldhaanamne gochuu fi reefa maatii dhowwachuun waan takkaa biyya lafaa irratti argamees, tahees hin beekne dha. Ilmaan Ormoo warra har’a nuyi maqaa isaanii illee hin beekne mana hidhaa kana keessatti wareegaman, kan guyaa guyyaan karaa irratti fi dagala keessatti ajjeefaman gootota keenya. Hojeetoon Mootumma lami Oromoo waan ta'aanfi qoofa yeeroo hunda mana hidhati dararama jiru fkn Jalel Taffese Jigi Tekkinishani Xiyyarati garuu akka Ogana siyyasa tokkoti yakkame August 6, 2016 qabame hanga of isaa walaluti tourch goodhame ba'ee, kana dura ilee july7, 2015 Kitaaba rabsite jeedhame hidha ture. Wareegami dargagoon Oromoo, Hojeetoon Oromoo fi Baratoon Oromoo kafala jiran kun heedu kan nama yaadeesudha. Xinnaa fi guddaa Oromoo bilisummaa saba isaaf wareegaman seenaan saba Oromoo boqqonna duraa irra isaan kewwata. Yaroo baayyee goonti Oromoo yaadatamanii fi farfaman erga wareegamanii booda. Seenaan qabsoo uummataa gootoaa haara takkaa hin yaadamne ni uummata. Fayisaa Lellisaa figitii maraatonii irratti itti dadhabee, itti dafqee yaroo injifannaa fi badhaasa dhunfaa isaa argachuu qaqqabe saba isaaf dabrsee kenne. Lubbuu isaa dabrsee kennuu irraa adda miti.
Biyya ala keessatti harcaatonni nafxanyaa biyyaa Itoopiyaa boontuu, afaan tokko, aadaa tokko fi alaaba tokko qabduu owwalaa TPLF irratti ijaara jedhanii ayyaan ilaalatoota Oromoo tokko tokko ofti qabanii mootummaa cee’umsaa ijaarra jedhanii wixxifachaa jiru. Yaroo haala kan argan namootni Oromoo tokko tokkoo gaaffii adda addaa kaasu. Gaaffii isaanii kana keessa : Gaaffiin Ummata Oromoo maal? Hegreen uummata Oromoo maal taha? Abbaan qabsoo kanaa eenyu? Gaaffillee kana namnuu akkuma fedhii isaa fi hawwii isaati deebifachuu yaaluun ni mala. Haa tahu malee dhugaa jiru dhoksuun hin danda’amu.